Molde: Nin soomaali ah oo ku geeriyooday dab ka dhacay guri kuyaalo Molde. - NorSom News
Molde: Nin soomaali ah oo ku geeriyooday dab ka dhacay guri kuyaalo Molde.
Booliska magaalada Molde ayaa ugu danbeyn sheegay magaca qof ku dhintay dab ka dhacay guri kuyaalo magaaladaas sabtidii lasoo dhaafay. Jabril Hussain Abdulle oo soomaali ah ayayna boolisku ku sheegeen magaca marxuumka geeriyooday oo 30 sano jir ahaa.
Dabkan ayaa ka kacay gurigan aroornimadii sabtidii aanu soo dhaafnay, isaga oo gaystay khasaaro isugu jirto naf iyo maalba. Waxaana dabka ku geeriyooday AHU marxuumkan soomaaliga ah oo guriga degenaa, iyada oo baaritaan loo diray qof kale oo isna guriga degenaa .Booliska ayaa sheegay in ilaa hada aysan cadeyn karin sababta dhalisay dabka, iyaga oo sheegay inay wali wadaan baaritaanka. Guriga uu dabka ka dhacay ayaa waxaa isku dar ku noolaa sadex qof.
Booliska ayaa sidoo kale sheegay in guriga uu dabku ka dhacay aan dib loo degi karin, ayna wali wadaan baaritaanka ku aadan dhacdadan.
Previous articleGabar soomaali ah oo magac ay ku furatay facebook UDI-du ku haysato
Next articleAqalka boqortooyada Norwey oo mar kale casuumay labo wiil oo soomaali ah